Qandaraaska waa fure u ah arooska guusha
Arooska ayaa ah kan ugu muhiimsan, dhacdo muhiim ah oo ku habboon nolosha qof kasta. Arooska dhabta ah wuxuu dhacaa hal mar keliya, iyadoon loo eegin sida ay tahay. Diyaarinta arooska waxay qaadataa wakhti dheer, sababtoo ah waxaad u baahan tahay inaad ka fekerto waxyaabo fara badan oo, asal ahaan, qabanqaabiya fasax.
Waa wakhti aad ku fikirto: maxaa dhacaya haddii, tusaale ahaan, hawlwadeen sawir (sawir-qaade, daaweeye, iyo wixii la mid ah) ma muuqan? Si dhakhso ah u raadso bedelka? Iyo haddii bedelka uusan ahayn xirfadle? Fasaxyada ayaa weligoodba burburin doona. Xitaa haddii bedelka uu wanaagsanaa, waxaad weli ku jiri doontaa khasaarooyin dhaqaale oo aad u liita.
Xasuuso xuquuqdaada iyo ha sameynin khaladaadka dhaleeceynta iyo khaladaadka. Haddii aad bixiso adeegyo kasta, waxaad tahay macaamilka. Oo kii aad ka amartayna adeegayaashan waa mid dhameeya. Sidaa daraadeed, wax walba waa la xaddiday dukumeentiyada quseeya - sharaxaadda adeegyada waxaa lagu sameeyaa qandaraaska, iyo xaqiiqada rasiidhka lacag-bixiyaha - helitaanka rasiidka. Taasi waa dhan! Dembiiluhu ma dhici doono kari kari waayi karo jawaabta sheegashadaada ee bixinta adeegga ku haboon. Wax walba waa la goostay. Hoos waxaa ku qoran talooyinka lagu soo gabagabeynayo qandaraasyada.
Qandaraas loogu talagalay bixinta adeegyada diyaafka leh makhaayad ama makhaayad. Waa hagaag, arooskee qol aan lahayn? Maqnaanshaha fasaxa noocan oo kale ah ayaa khasaarin doona caddaalad. Qandaraaska waa inuu muujiyaa dhammaan qaybaha ugu muhiimsan ee adeegga fasaxaaga, sida: tirada dadka, taariikhda iyo wakhtiga, liiska, qiimaha adeegyadaa la bixiyo, iyo liistada adeegyada lagu hayo. Xasuusnow, badanaa waxay kuxirantahay qandaraas sax ah. Maaha wax aan caadi aheyn in makhaayadku soo bandhigo shuruudo aan la fileyn oo aan la fileynin oo loogu talagalay isticmaalka dheeraadka ah ee isticmaalka korontada - qalabka hawo-qabadka iyo rakibidda qalabka muusiga. Laakiin meheradku waa sax. Sidaa daraadeed, waa lagama maarmaan in qandaraaska la siiyo faahfaahin badan, inta badan, ka sii fiican. Ogow - marka ugu yar ee ugu yaraan hal qodob oo qandaraas ah waxaad xaq u leedahay inaad magdhow magdhow foomka dib u celinta. Waxa kale oo aad dalban kartaa magdhow magdhow oo sababay jebinta heshiiska. Khasaare ayaa loo tixgelin karaa tirada u dhiganta qiimaha u dhexeeya qiimaha adeegyada makhaayadkan iyo qiimaha makhaayad kale, oo loo baahan yahay in la dalbado.
Heshiiska waa inaysan aheyn mid shakhsi ah, kaliya saxiixyada macaamilka iyo fuliyaha ayaa loo baahan yahay. Macaamiil, dabcan, waa shakhsi.
Heshiiska lala yeesho martida, sawir, sawirqaade. Waa muhiim in la ogaado in hoggaamiyahaagu uu ka diiwaangashan yahay ganacsade shakhsiyadeed ama inuu wakiil ka yahay urur. Hadday sidaas tahay, markaa waxaan u baahannahay inaan qandaraas la gaaro. Qandaraaska wuxuu ka hadlayaa habka lacag bixinta, masuuliyada aan waxqabadka ahayn iyo waqtiga kama dambaysta ah ee keenista qalabka dhameystiran.
Haddii qandaraaslahaagu yahay shaqsi, markaas heshiiska waa ikhtiyaari. Waa ku filan tahay inaad hesho risiit si aad u hesho lacag, kaas oo aad ku cadeyn karto waqtiga kama dambeynta ah ee dhamaystirka shaqada, iyo dhammaan qorshayaashaada. Waxa ugu muhiimsan waa in la helo xogta baasaboorka. Waa inay joogaan qandaraaska (rasiidka).
Heshiisyada kala ah qurxinta hoolka, shirkadaha gaadiidka iyo kuwo kale. Shirkadahaasi waxay u baahan yihiin in ay soo afjaraan qandaraaska mana jiraan wax kale oo dibadda ah. Ka dib markaa, waxaa aad muhiim u ah in aad aragto waqtiga saxda ah ee limousine ee albaabka, iyo imaanshaha goobta - hoolka ugu quruxda badan ee nidaamka midabka aad u baahan tahay.
Qandaraaska shirkada gaadiidka, cadeeyaa nooca baabuurka, waqtiga guud ee amarka, wakhtiga feylka, iyo shuruudaha lagama maarmaanka ah ee lagama maarmaanka ah.
Sidoo kale waa habboon in la barto dhacdo sida ballaadhan oo kale sida deebaajiga. Wuxuu si caddaalad ah u cadeeyay labada dhinac ee heshiiskii. Wareejinta codsiyada lafteeda waxaa loo tixgeliyey 380 iyo 381 maqaallo Sharciga madaniga ah ee Ruushka. Hadafku waa in, haddii waajibaadka ku qeexan qandaraaska aan la dhammaystirin, xisbiyada qaada kaydka, qandaraaslaha waa inuu ku celiyaa macaamiisha (waa adiga) lacagta caddaanka ah ee labanlaab (!). Haddii aad rabto inaad bedesho waxqabadka, ama arooska sababo aan sababi karin, markaa maskaxda ku hayso - ma heli doontid lacag dib u celin. La soco in lacagta loo tixgeliyo deyn ah kaliya marka la sameynayo heshiis qoraal ah oo ku haboon.
Waxaa laga yaabaa in aad u malaynayso in qoritaanka qandaraasku uu yahay mid caqli gal ah oo adag, khaasatan markaa waa inay noqdaan kuwo badan. Haa, iyo fuliyaha ayaa ogaan kara qoritaanka heshiiskii lala galmoodayay, taas oo, habka, mar horeba waa munaasab ah in lagu muujiyo karti-gelinta iyo karti-xirfadeedka. Ha joojin! Heshiisyadu waxay kaa badbaadin doonaan xaaladaha ugu badan ee aan la filayn. Waxay kaa badbaadinayaan oo keliya unugyada dareemayaasha, taas oo ah, sida qof kastoo ogyahay, aan dib loo soo celin, iyo lacagta muhiim u ah qoyska dhalinyarada, laakiin sidoo kale fasax aad u muhiim ah. Maqaalkani ma aha mid la abuuray, waxaa soo gaadhay dad badan oo khaladka ah.
Oo arooskaaguna ha faraxsanaado, oo ha xajisto Ilaaha Aabbaha ah, kan keligiis ah ee naftiinna ku jira! Waxba ha iska dhigin fasaxaaga!
Cabitaanka xafladaha arooska
Sifooyinka Wedding leh gacmahaaga
Xumad la'aan: sameyso arooska arooska indhaha buluuga ah
Sheeko xariif ah oo run ah: bouquet arooska ee aroosadda leh gacmahaaga
Waxa la sameeyo ka hor arooska
Arooska buluugga ah: sida loo sameeyo si sax ah?
Qodobo waxtar leh oo liin ah
Maaskarada si aad u kala qaybiso timo qoorta ah oo leh rosemary
Qaab dhismeedka Vasily Makakovich Shukshin
Sidee u soo jiidataa lacag iyo nasiib la Feng Shui?
Muuqaal Video ah oo ah qoorta iyo qoorta
Cuntada Carbonara oo leh hadhuudh iyo miro
Maraq lentil leh celery iyo isbinaajka
Ku guuleystaha nolosha: Anna Mathison iyo nolosheeda gaarka ah
Sidee loo nadiifiyaa guriga tamarta xun?
Liposuction ee caloosha
Dharka qurxinta ee buuxa ee sanadka 2016: sawirkii ugu quruxda badnaa
Bariis qudaar ah oo ku yaal shaashadda
Eggplant ayaa burburay
Hadiyado aan caadi ahayn oo loogu talagalay nin
Qaado qof la jecel yahay ka dib khiyaano